Busquets oo qeexay xidigaha uu arko inay buuxin karaan booskiisa, ee isugu jira kooxda Barcelona iyo wixii ka baxsan – Gool FM
Busquets oo qeexay xidigaha uu arko inay buuxin karaan booskiisa, ee isugu jira kooxda Barcelona iyo wixii ka baxsan
(Yurub) 12 Abriil 2019. Khadka dhexe kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Spain ee Sergio Busquets ayaa wuxuu shaaca ka qaaday, xidigaha uu arko inay buuxin karaan booskiisa mustaqbalka, kadib marka uu ka baxo garoomada.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysi uu Sergio Busquets kaga hadlay arintan, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa.
“Waxaa suuragal ah in ciyaaryahanka ugu badan ee soo shabaha awooda jirka iyo maskax ahaanba uu yahay Oriol Busquets ee ka tirsan da’ayarta kooxda Barcelona”.
“Marka loo eego heerka yurub, iyo guud ahaanba, Rodrigo Hernandez ayaa u muuqda mid aan si buuxda isugu qaab nahay”.
Yeelkadeeda, 30 jirka kooxda Barcelona ee reer Spain Sergio Busquets ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican booskiisa ee kubadda cagta aduunka, isagoo ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ay ku taagan tahay Blaugrana.